Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisana amin'ny media sosialy | Martech Zone
Vao haingana izahay no nizara infographic sy lahatsoratra izay nanisy tsipiriany momba ny dingana valo mandehana ny paikadin'ny media sosialy. Betsaka aminareo no efa nandefa ny paikadin'ny media sosialy saingy mety tsy hahita firy firy firy araka ny nantenainareo. Ny sasany amin'izany dia mety manivana algorithms ao anatin'ny sehatra. Ny Facebook, ohatra, dia aleonao mandoa vola hampiroboroboana ny atiny toy izay mampiseho azy mivantana amin'ny olona manaraka ny marikao.
Manomboka izy rehetra, mazava ho azy, amin'ny fanaovana ny marikao hanaraka azy.
Maninona ny mpanjifa no manaraka ny marika an-tserasera?
Interest - 26% ny mpanjifa milaza fa mifanaraka amin'ny tombotsoany ny marika
Offering - 25% ny mpanjifa milaza fa manolotra vokatra na serivisy avo lenta ny marika
toetra - 21% amin'ireo mpanjifa no milaza fa mifanaraka amin'ny toetrany ny marika
tolo-kevitra - 12% ny mpanjifa milaza fa mendrika ny hatolotra ny namana sy ny fianakaviana ny marika
Andraikitra ara-tsosialy - 17% amin'ireo mpanjifa no milaza fa tompon'andraikitra eo amin'ny fiaraha-monina ny marika
Izany dia nilaza, raha tsy mahita ny fampiratiana antenainao ianao, ity sary avy any Branex ity, Media sosialy 11 Tactics fampiroboroboana ny fifamofoana izay miasa marina, manome antsipiriany ny tetika azonao ampiasaina:
Mahaiza ny mpihaino kendrenao - Fantaro izay zava-dehibe indrindra amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fandinihana atiny hafa nozaraina sy nasiana fanamarihana indrindra… avy eo ampiasao ireo paikady mitovy amin'izany. Tiako ny mampiasa fitaovana toy ny BuzzSumo ary Semrush ho an'ity. Farafaharatsiny farafaharatsiny, azonao atao ny mijery ny valin'ny fikarohana sy ny forum.
Ataovy miavaka ny hafatrao isaky ny sehatra media sosialy - Manatsara ny horonan-tsarinao, sary ary soratra ho an'ny sehatra tsirairay. Gaga foana aho rehefa mahita olona mamoaka sary mahafinaritra… vao hitako fa tapaka ao anaty rindranasa satria tsy nohamarinina hijerena ilay lampihazo.
Olona gaga - Tian'ireo mpanjifa mizara zava-misy, antontan'isa, fironana, fikarohana (sy meme) ao amin'ny media sosialy, indrindra raha fahitana mahaliana na manahirana.
Mamorona atiny misy fifamatorana ambony - Noho ny safidy eo amin'ireo fanavaozana matetika na fanavaozana mahatalanjona, aleoko ny mpiasako sy ny mpanjifako mandany fotoana bebe kokoa ary manao fanavaozana mahatalanjona izay misarika ny sain'ny mpanatrika.
Miaraha miasa amin'ireo mitaona sosialy - Matoky ny mpihaino anao ny mpanentana. Ny fidirana amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa, marketing marketing, ary sponsorship dia afaka mitondra ny mpihaino azy amin'ny marikao.
Omeo antso-ho-hetsika mazava - Raha misy mahita ny bitsika na fanavaozana farany anao, inona no antenainao hataon'izy ireo manaraka? Napetrakao ve izany fanantenana izany? Manohy mampitandrina ny amin'ny fivarotana mafy ao anatin'ny fanavaozana ara-tsosialy aho, fa tiako kosa ny maneso ny lalan-kiverenana amin'ny tolotra iray, na manome antso an-tariby amin'ny piraofiliko sosialy.
Mitadiava fotoana mety indrindra handefasana - Mety ho gaga ianao amin'ity iray ity, fa tsy hoe rehefa mamoaka ianao dia matetika fa momba ny fotoana ivoahan'ny olona sy fizarana ny be indrindra. Alao antoka fa mijanona eo alohan'io fiolahana io ianao. Raha, amin'ny tolakandro, avo kokoa ny taha-tsindry… dia aza hadino ny mamoaka amin'ny mitataovovonana ao amin'ny faritry ny fotoana ampiasain'ny mpanjifanao.
Mampiasà horonantsary mivantana ao amin'ny Facebook - Ity no paikady tokana izay mbola tsy andoavam-bola (ary) ary mbola mampiroborobo fatratra ny Facebook. Araraoty izany ary mandehana mivezivezy tsindraindray miaraka amin'ny atiny tsara ho an'ny mpihaino anao.
Midira vondrona misy ifandraisany - LinkedIn, Facebook, ary Google+ dia manana vondrona mahatalanjona sy velona miaraka amin'ny mpanaraka marobe. Mamoaha fampahalalana momba ny soatoavina na manomboka fifanakalozan-kevitra tsara amin'ireo vondrona ireo mba hametrahana ny tenanao ho toy ny fahefana azo itokisana.
Mizarà votoaty mahafinaritra - Tsy mila manoratra izay rehetra zarainao ianao. Ohatra, ity infographic ity dia tsy noforonina na navoakako - izany no nanao Branex. Na izany aza, ny atiny sy ny torohevitra ao anatiny dia misy ifandraisany amin'ny mpihaino ahy, noho izany hizara izany aho! Tsy manala ny fahefako amin'ny indostria izany. Ny mpihaino ahy dia mankasitraka ahy mahita sy mahita atiny sarobidy toy ity.
Mangataha valiny - Ny famindrana ny mpihaino amin'ny fiaraha-monina dia mitaky fifanakalozan-kevitra. Ary ny fanovana vondrom-piarahamonina ho mpisolo vava dia mitaky asa mafy iray taonina. Angataho ny mpihaino anao hanome valiny ary hamaly azy haingana mba hampitombo ny fifandraisan'ny media sosialy!
Ity ny infographic feno avy Branex:
Tsy ampy? Ity misy vitsivitsy hafa avy amin'ny manodidina.io, Fomba tsotra 33 hampiroboroboana ny fifandraisan'ny media sosialy izao.
Mametraka fanontaniana ao amin'ny lahatsoratranao sosialy dia mahatonga ny olona haneho hevitra, mampitombo ny firotsahana amin'ny hafatrao. Mametraha fanontaniana voafaritra tsara sy mazava fa tsy hoe inona no atao hoe kabary.
AMA dia niasa be tamin'ny Reddit sy Twitter. Ankehitriny, miasa tsara amin'ny Facebook ihany koa izy ireo. Ampahafantaro ny olona hamaly anao ny fanontaniana rehetra (amin'ny lohahevitra manokana) mandritra ny adiny roa.
Rehefa mampiasa ny vokatrao ny mpanjifa ary mandefa momba azy (hevitra an-tsoratra na sary na horonan-tsary), hampiroborobo izany atiny izany ho an'ireo mpankafy anao. Ireo karazan-dahatsoratra (atiny ateraky ny mpampiasa) dia miteraka fifandonana bebe kokoa.
Na inona na inona malaza manana vintana lehibe kokoa ho tia, hizara na haneho hevitra. Jereo hoe inona no fironana sy mifandraika amin'ny mpankafy anao ary zarao matetika.
Mikaroha mpampiasa mampiasa tenifototra ary valio ny bitsika sy ny lahatsoratr'izy ireo: mampitombo ny fandraisana andraikitra amin'ny mombamomba anao manokana izany rehefa mijery ny hafatrao izy ireo.
Ary koa, mitady teny lakile mifandraika amin'ny tsenao ary mifandraisa amin'ireo olona mampiasa ireo teny lakile ireo amin'ny lahatsoratr'izy ireo.
Valio hatrany amin'izay filazalazana azonao amin'ny media sosialy - izany dia mampahafantatra ny olona fa miahy anao ary mihaino ianao izay mampitombo ny fifamofoana.
Curate ary hampiroborobo ny atin'ny olon-kafa fa miaraka amina hack kely: tagohy foana ny loharano mba hahafantaran'ilay loharano fa voatonona izy ireo. Ny atiny tsy misy resaka dia mahazo fidirana ambany kokoa (indraindray tsy misy) noho ny iray misy iray na roa tonta.
Alefaso izay mahasoa ny fiaraha-monina ary ampahafantaro ny olona fa miahy anao izy soatoavina sosialy. Ny fiantrana, ny fanampiana ary ny andraikitra ara-tsosialy dia mampiakatra ny firotsahana.
Mihazakaza fanomezana na fifaninanana iray izay ny fankafizana / hevitra dia ampahany amin'ny fanomezana / fifaninanana. Mampitombo ny fifamofoana ho azy.
Curate rohy / loharanom-pahalalana marobe ary zarao miaraka amin'ireo mari-pankasitrahana (tag ny loharano). Ny firesahana be dia be matetika dia mahazo fifamatorana betsaka.
Ampiasao ny tenifototra nalaza rehefa mahita ireo izay azo ampifandraisina amin'ny tsenanao / marika amin'ny fomba hafa ianao.
Fikarohana sy tadiavo ny fanontaniana apetraky ny olona (mifandraika amin'ny tsenanao) amin'ny toerana toa ny Twitter, Quora, Google+ ary maro hafa ary valio izy ireo.
Ampahafantaro a fivarotana fotoana voafetra/ fihenam-bidy na lazao ny tahirin'ny mpankafy fa lany tamina vokatra iray - ny tahotra-tsy-banga dia hanampy anao hahazo tsindry bebe kokoa amin'ny hafatrao.
Rehefa mibitsika na mamaly lahatsoratra iray ianao, mampiasa GIF mihetsika. Ny GIF dia mampihomehy amin'ny fomba voajanahary ary mitaona ny olona hitia / hanome hevitra momba azy ireo (fifamofoana bebe kokoa).
Mangataha valiny (amin'ny vokatra sasany iasanao) sy ny hevitra (ho an'ny vokatra vaovao tadiavin'ny olona). Mahagaga ny manamarika hoe firy amin'ireo mpankafy anao no manana hevitra na hevitra (fa mangina fotsiny satria tsy nisy nanontany azy ireo).
manome hatsikana ao amin'ny hafatrao. Ny vazivazy tsindraindray dia manintona mpankafy / fizarana bebe kokoa na koa fanehoan-kevitra indraindray - mitarika fifamofoana bebe kokoa izany rehetra izany, noho izany
Do fanadihadiana sy ny fanadihadiana (mampiasa fisongadinana fandatsaham-bato amin'ny toerana toa ny Facebook, Twitter). Na dia vondron'olona vitsivitsy mandray anjara amin'ny fandatsaham-bato aza dia manampy amin'ny fampitomboana ny fifamatoranay ary hahatratra mora foana.
Mandraisa anjara amin'ny mifandraika amin'izany Twitter chats satria matetika dia avo ny fifamofoana mandritra ny resaka Twitter noho ny antony maro samihafa (habetsahan'ny bitsika, lazan'ny #hashtag, ny vondrom-bahoakam-pifandraisana sns)
Nahazo Customer reviews? Zarao amin'ny piraofilinao sosialy ary asio marika ireo mpanjifa nanome anao hevitra / naoty.
Manokana minitra vitsy amin'ny andronao hahitanao ary araho ny olona mifandraika amin'izany avy amin'ny indostria / tsenao. (Tokony hampiasa fitaovana manamboatra azy ho anao koa ianao)
Asehoy ireo mpankafy anao fa misy olombelona ao aorian'izany - amin'ny alàlan'ny fampiasana Emoticons toy ny olombelona sisa rehetra.
Mizarà atiny mifandraika amin'izany mandritra fety ary hetsika hafa amin'ny fizaran-taona. Ireo lahatsoratra ireo mazàna dia manana taham-pifanarahana tsara kokoa noho ny lahatsoratra mahazatra hafa.
Asehoy ny fankasitrahana; misaotra ireo mpankafy anao tamin'ny dingana lehibe (sy amin'ny ankapobeny) ary hiaraka aminao ireo mpankafy anao.
Fantaro izay fotoana tsara indrindra handefasana (arakaraka ny demografikan'ny mpankafy anao) ary apetraho amin'izao fotoana izao. Tokony hanatsara ny famoahana lahatsoratra ianao raha te hahatratra faran'izay betsaka satria misy fiatraikany mivantana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny ankamaroan'ny tranga izany.
Raha te-hitarika ny olona hanindry ianao dia lazao mazava tsara izany. “Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa.” Lahatsoratra miaraka amin'i Antsoy-to-hetsika mahomby kokoa amin'ny fampidirana olona ny lahatsoratra.
Angataho ny mpankafy anao “Manaova namana". Betsaka ny olona manao izany ary mampitombo ny fahafaha-miditra sy ny fandraisana anjaranao amin'ny lahatsoranao fotsiny izany.
Ireo lahatsoratra ara-tsosialy dia toa mahatratra bebe kokoa rehefa ianao tag ny toerana iray ho azy ireo.
Fantatsika rehetra izany sary mahazoa firosoana bebe kokoa (na amin'ny Facebook na Twitter). Fa kendreo ny sary tsara kalitao indrindra rehefa mizara azy ireo.
Ary koa, angataho ny olona hamerina mandefa tweet na mizara mazava. Izany dia manaraka ny lalàna CTA.
Nahita loharanom-pahalalana iray izay nanampy? Sa nisy olona nanampy anao tamin'ny orinasanao? Omeo izy ireo a mikiakiaka, asio marika izy ireo ary ampahafantaro ny mpankafy anao.
Cross-mampirisika ny mombamomba anao eo amin'ny fantsona sosialy hafa. Nahazo tabilao Pinterest mahafinaritra? Aza adino ny mampiroborobo ny tabilao Pinterest anao amin'ny Facebook na Twitter (na toerana hafa) isaky ny fotoana fohy.
Fiaraha-miasa ary mpiara-miasa amin'ny marika malaza hafa / orinasa amin'ny fizarana lahatsoratra na famoronana tolotra. Ny fiaraha-miasa dia manampy anao hahatratra ireo mpankafy bebe kokoa (avy amin'ny marika hafa), hampitombo ny firotsahana sy ny isan'ny mpanaraka anao.
Tags: branexbuzzsumoandraikitraFacebookahoana noSary torohayInstagramvelona Videosemrushfifandraisan'ny media sosialyTwitter